Ny soavaly tsara tarehy indrindra eto an-tany: karazana sy toetra | Soavaly Noti
Ny soavaly dia iray amin'ireo zavaboary tsara tarehy sy be indrindra monina amin'ny planetantsika. Izy ireo dia misy karazana sosona, hazakazaka ary fitoviana samihafa, samy manokana amin'ny fombany avy. Androany dia hifantoka amin'ny hatsarana isika, Vonona ny hihaona amin'ireo soavaly tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao?
2 Espaniola (ovay)
9 Cobra Irlandey
12 Tendrombohitra Rocky
Tandindom-pirenen'i Turkménistan, Izy io dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo karazana Equine izay manana volom-bolo mamirapiratra indrindra manintona ny saina rehefa manazava azy ny taratry ny masoandro. Ny famirapiratany mampiavaka azy dia noho ny proteinina izay toa metaly avokoa rehefa misy hazavana mivoaka aminy. Izy io dia iray amin'ireo karazan-java-bitika misy karazana vitsy an'isa manerantany, manodidina ny 1.250. Karazana atletisma tena izy io noho ny génétique lehibe. Ny lokon'ny palitaon'ity karazany ity dia: blond, black, palomino na grey.
Loharano: youtube, com
Ny toetra mampiavaka ny Akhal-Teke dia mahatonga azy io ho iray amin'ireo fitoviana mahia indrindra misy izany: ny lohany maivana, ny sofiny lava sy manify miakatra avo, ny rantsany lava sy manify ary koa ny tendany ary ny hahavony 160 sm. Milamina tsara ny hoditra ary marefo ny palitao. Somary tery ny rambony sy ny mony ary saiky tsy eo ny sisiny.
El Soavaly Andalosiana Izy io dia karazana soavaly espaniola teraka tany Andalusia. Any Espana dia fantatra matetika amin'ny anarana hoe «soavaly espaniola» ary "Pura Raza Española" no iantsoana azy amin'ny fomba ofisialyNa dia misy karazana espaniola hafa aza dia heverina fa ny equine espaniola no quintessential.
Izahay dia teo aloha iray amin'ireo hazakazaka tranainy indrindra eto an-tany, soavaly Iberianina iray karazana baroka amin'ny fahatsapana sy faharanitan-tsaina lehibe ankoatry ny fananana a malefaka toetra sy fahalalam-pomba. Angamba io farany io no nampiavaka azy ireo indrindra. Izany koa no nahatonga azy io ho iray amin'ireo soavaly tsara indrindra eto an-tany amin'ny ady.
Tena notadiavin'ny andriana noho izy io fitondra sy hatsarana mahafinaritra, miavaka amin'ny vatany matanjaka sy matanjaka, ary ny fatiny sy ny rambony.
Heverina ho iray amin'ireo soavaly tsara indrindra eto an-tany ny dia lavitra, dia mora izany manavaka azy amin'ny palitao misy mottled manokana, manana faritra maizina ampifangaroina amin'ny hoditra mavokely ary miteraka hodi-tenda.
Ireo Indiana Nez Perce no nahita an'ireto soavaly ireto niaraka tamin'ny volony manokana, ilay prototype mety indrindra amin'ny haza lambo sy ady. Mikasika ny toetrany dia miavaka izy ireo ny andriana ambony, ny tanjaka ary ny fahaizany mahay. Ny anarana "Appaloosa" dia avy amin'ny reniranon'i Palouse, izay namakivaky ny faritra onenan'i Nez Perce.
Tsy isalasalana fa, amin'ny fanangonana ireo karazam-borona tsara indrindra eto an-tany amin'ny soavaly, dia tsy maintsy eo ny Arabo, sa tsy izany?
Misy ny fikarohana arkeolojika izay manondro fa 4.500 XNUMX taona lasa izay dia nisy soavaly nitovy tamin'ny Arabo ankehitriny. Izany no mahatonga azy ireo iray amin'ireo karazana soavaly tranainy indrindra. Ny razamben'ny arabo dia hita amin'ny karazana soavaly mitaingina maoderina isan-karazany. Betsaka ny soavaly soavaly arabo, saingy ireo tsipika rehetra ireo dia inoana fa avy amin'ny Arabo Kuhaylan.
Ny faharanitan-tsaina sy fanoherana mahery vaika, miaraka amina toetra mahafinaritra sy hatsarana mahafinaritra, izy ireo dia iray amin'ireo karazany ankafizin'ny fampirantiana, fitafiana, fandehanana, fanapahana, fitsambikinana na fitsangatsanganana ara-pahasalamana.
Ny soavaly arabo dia manana aoriana kely sy avo lenta ary ny rambo mihazona ambony. Ny iray amin'ireo mampiavaka azy dia ny loha dia miendrika wedge, misy handriny, be maso, be orona ary orona kely.
Ny soavaly Friesiana, antsoina koa hoe Frisian na Friesian, dia karazany iray avy amin'ny faritr'i Friesland any Netherlands.
Ny soavaly Friesiana no manana toetra tsara sy fahaizan-tsaina tsara volom-borona mainty na volom-boasary mavo mainty tsy dia misy loko hafa, ary ny fisian'izy ireo. Ny mane sy ny rambony ny tena matevina sy be dia be, hitantsika izy ireo indraindray somary mikotrana toy ny tamin'ny sary teo aloha. Ny volony koa dia manana volom-borona betsaka. Amin'ny lohany, izay lava lava, ny ny sofina kely miarina foana ary kanto. Izy ireo dia afaka refesina hatramin'ny 175 cm.
Io no nampiasan'ny Alemanina ho soavaly ady, ary tsikelikely, tamin'ny alàlan'ny lakroa isan-karazany, toy ny tarika Andalosiana, nohatsaraina ny karazany mandra-pahatongan'ny Friesianina ankehitriny.
Vokatry ny mifangaro amin'ny Shires, Frisianina, Dales ary ny hafa karazana soavaly anglisy anglisy, ilay soavaly gypana (na mpandeha gipsy) dia natsangan'ny gypsies tamin'ny taonjato faha-XNUMX, na olona romana avy any UK.
Es fantatra amin'ny hatsaran-tarehiny, ny fahaizany miovaova ary ny fahaizany mandinika, satria ny fianakavian'i Gipsy, mihetsika tsy tapaka, dia mila soavaly matanjaka iray izay samy mendrika ny misintona ireo sarety mavesatra be natao ho toy ny fivezivezena ary ho entina miverina tsy misy mpiasa indray mandeha. Izany dia noheverina ho iray amin'ireo soavaly manan-tsaina indrindra izay hita eto amin'ny tontolon'ny Equine, mametraka fifamatorana matanjaka kokoa amin'ny tompony izy ireo fa tsy amin'ny karazana hafa manana toetra maotina kokoa. Izany rehetra izany no mahatonga ny soavaly gypana ho Tendrombohitra mety indrindra ho an'ireo mpitaingin-tsoavaly na firy taona izy ireo.
Ny karazany Haflinger, antsoina koa hoe Avelignese, dia novolavolaina tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX tany Aotrisy sy Italia. Manana razambe arabo tamin'ny alàlan'ny soavaly mpanorina ny karazany ankehitriny: Folie (teraka 1874, zanaka soavaly arabo malina).
Soavaly io kely sy matanjaka tena nifanaraka tamin'ny mandeha an-tendrombohitra, izay hahatratra 137 sm ka hatramin'ny 152 cm ny haavony. Ny palitaony, palomino foana, dia mety manana loko avy amin'ny hazavana ka hatramin'ny aloky ny maizina. Amin'ny tranga sasany, ny ampahany amin'ny kibo dia maivana kokoa noho ny sisa amin'ny vatana.
Karazan-tany tany Islandy. Na dia mitovy amin'ny an'ny soavaly soavaly aza ny halavany fohy (eo anelanelan'ny 125 sm sy 145 cm ny halavany, dia soavaly mendrika izy ireo. Io ihany no karazana soavaly avy amin'ity firenena ity.
Hitanay ireo andinin-tsoratra masina tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay milaza amintsika ny fomba nahatonga ireo soavaly ireo ho foto-pivavahana tamin'ny kolontsaina Nordic. Izy ireo dia mino fa avy amin'ny soavaly skandinavianina teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Mampiavaka ity soavaly ity ny volom-borona betsaka satria nifanaraka tamin'ny toe-piainana faran'ilay nosy.
Ity karazana ity mipetraka ao Irlandy, manana fiaviana somary tsy azo antoka izy io. Ny sasany manohana ny teoria fa ireo soavaly ireo dia avy amin'ny firenena Nordic, fa ny sasany kosa milaza fa avy amin'ny Irlandey tanteraka izy ireo. Na izany na tsy izany dia tsy isalasalana ny hatsaran-tarehin'izy ireo, izay ankafizin'izy ireo betsaka, ary koa ny hatsaram-panahin'izy ireo.
Izy io dia karazany voalanjalanja sy voalanjalanja tokoa, soavaly tondra-droa miaraka amin'ny hozatra mivoatra be, izay mahatonga azy io ho soavaly tena be dia be izay manolotra hajia mahavariana.
Ny mampiavaka an'ireny equines ireny dia ny lava volony amin'ny tongotra izay antsoina hoe volom-borona ary izany sarona amin'ny fiarovan-doha izany. Toy izany koa mane sy rambony manana volo matevina. Matetika izy ireo dia manana manga manga, maso hazel na iray amin'ny loko tsirairay. Ny palitaon'ireto biby sarobidy ireto dia mety ho matevina na hosodoko toy ny tamin'ny sary teo aloha.
Mustangs na mustangs Izy ireo no soavaly dia any Amerika Avaratra. ny volony Tena miavaka izy satria a afangaro kafe miaraka amin'ny feo manga ary manome azy hamirapiratra manokana. Ara-dalàna raha raisina ho iray amin'ireo soavaly tsara indrindra eto an-tany izy, sa tsy izany?
Raha ny marina dia soavaly soavaly (ny biby izay mandositra na very ary efa voaangona amin'ny fiainana an-tany hafa) satria, tamin'ny faran'ny Pleistocene, dia lany tamingana ireo mpitaingin-tsoavaly tany Amerika Avaratra ary natolotry ny mpandresy espaniola tamin'ny taonjato faha-XNUMX. ny ny razana dia ny Espaniola Andalosiana, ny Arabo na ny Hispano-Arabo. Ny lemaka amerikana midadasika sy ny tsy fisian'ireo mpihaza voajanahary dia nanampy tamin'ny fanitarana azy haingana. Androany dia atahorana ho lany tamingana izy ireo, na dia eo aza ny fiahiahiana ny tontolo iainana sy ny zavaboary monina ao aminy, dia mahatonga antsika hanana lafy tsara amin'ity olana ity.
Tena ankasitrahana izy ireo noho ny fanoherana sy ny tanjany lehibe, izy ireo dia santionany kely volo izay manana haavo izay eo anelanelan'ny 135 sm sy 155 cm. Raha ny toetrany, Tena mandehandeha izy ireo ary mizaka tena mahaleo tena.
From ny faritany Le perche any Frantsa, Ny karazana soavaly Percheron dia ekena noho ny tanjaka sy ny fahamendrehany ary koa ny hatsarany mampiavaka azy.
Ireo soavaly novokarina tao amin'ity faritany frantsay ity dia nanana laza malaza, noho izany, nanapa-kevitra ny hiampita soavaly antsoina hoe Jean le Blanc miaraka amin'ny soavalivavy any Le Perche tamin'ny 1823. Avy amin'io soavaly io no midina ny soavaly Percheron rehetra. Inoana koa fa ny soavaly arabo dia manana andraikitra lehibe amin'ny karazany.
Foko teratany Rocky Mountains any Etazonia, izay niavian'ny anarany "Rocky Mountain". Tany atsinanan'i Kentucky, manodidina ny taonjato faha-XNUMX, dia nisy soavaly tanora niseho, izay tsy ho ela dia hanomboka hiantso ny "soavaly Rocky Mountain" izy ireo, ary avy eo no nipoiran'io laharana io izay sarobidy indrindra tany Eropa sy Amerika Avaratra.
Malaza noho izany pigmentation hafahafa an'ny palitao, misy tonony sôkôla amin'ny vatanao, ny volo blond ary ny rambony miloko miaraka amin'ny volafotsy. Ny Rocky Mountain, manarona saika ny loko miloko mitovy amin'ny Equine, na izany aza ilay voalaza etsy ambony dia heverina ho tsara tarehy indrindra amin'ity karazany ity.
Fantatra ny karazany, koa noho ny matsiro sy ny toetrany tsara, ampitahaina amin'ny alika amin'ny fahafinaretany amin'ny orinasa olombelona.
Ireo firazanana hafa izay heverina ho iray amin'ireo tsara tarehy indrindra, na dia tsy nampidirinay tao amin'ny lahatsoratray aza izany dia: Roan-manga, soavaly Lusitanianina, Hanoverian, torolàlana anglisy na pinto.
Inona ny hevitrao? Inona no heverinao fa tsara indrindra amin'ireo soavaly tsara indrindra eto an-tany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Ny soavaly tsara tarehy indrindra eto an-tany